Fotoana izao Hampitsaharana Ny Didimpoitram-behivavy Ao Amin’ny Firenena Tokana Ao Amerikana Latina Mbola Ahitana izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2015 9:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , русский, Italiano, Ελληνικά, Deutsch, Română , Nederlands, Español
Mpikambana ao amin'ny foko Embera ao an-tanànan'i Crucito ao Tierralta Córdoba, Kôlombia. Sary nalaina avy amin'ny kaonty Flickr an'i Agencia Prensa Rural eo ambany lisansa Creative Commons.
Ao Kôlombià, misy ireo vondrom-piarahamonina teratany izay mbola manao ny didimpoitram-behivavy. Io no mametraka an'i Kôlombià ho firenena tokana ao Amerika Latina mbola manao io fomba io, araka ny filazan'ny fikambanana sasantsasany.
Ao anatin'ny taonjato faha-21, dia mahazo ny vehivavy 140 tapitrisa ao amin'ny firenena 26 eto ambonin'ny tany ny didimpoitram-behivavy, ka ao anatin'izany i Kôlombià. TSIA AMIN'NY FANOMBINANA NY VEHIVAVY!!
Ao amin'ny vondrom-piarahamonina teratany Emberá, izay mbola ampiharana ny didim-poitram-behivavy, nisy zazavavy tanora vitsivitsy maty vokatry ny fanatanterahana azy tamin'ny 2007. Dimy taona taty aoriana ny fanambarana ampahibemaso avy amin'ireo manampahefana teratany milaza ny hampiatoana ity fomba ity. Saingy tsy nahavita nanakana tanteraka ny fandrombinana ny taovam-pananahan'ny vehivavy izany — tamin'ny herintaona, zazavavikely Emberá efatra no maty taorian'ny fanaovana azy an-tsokosoko.
Aza adinoina ny vaovaon'ny fandrombinana ny vehivavy izay mbola atao amin'ny vehivavy Emberá. Eny, eto Kôlombià izao…
Alberto Wuazorna, mpitarika ny Emberá Chamí (miorina ao afovoany sy andrefan'ny tangorontendrombohitra Andes Kôlombiàna), niasa nihoatra ny telo taona ho fanairana ny fokonolona ny tanjona hamafana tanteraka ny fandrombinana ny vehivavy. Mazava loatra fa tsy asa mora izay satria ao anatin'ny fomba fifehezana sy fitarihan-dalana ara-pananahana ny vehivavy io fomba io. Amin'ny fifotorana amin'ny zava-niainany dia nambarany fa “eto izahay dia miatrika raharaha efa nisy anjato taonany, fomba iray mihoatra ny 200 izay tsy ho vitanay ny manafoana azy ao anatin'ny telo taona monja.”
Ahoana ny nahatongavan'ny didimpoitram-behivavy tany Amerika “mitopatopa ao anatin'ny tantara sy ny anganongano.” Víctor Zuluaga, mpahay tantara efa misotro ronona avy ao amin'ny Oniversite Teknolojikan'i Pereira izay efa niasa niaraka tamin'ny vondrom-piarahamonina Emberá Chamí avy ao Risaralda hatramin'ny taompolo 1970s niteny hoe:
[…] tamin'ny taonjato faha-17, raha efa nifehy ny ankamaroan'ny vondrom-piarahamonina teratany ny voanjo, dia mbola tsy voafolaka ny Chamí. Vondrom-piarahamonina mifindrafindra toerana ry zareo ary mivelona amin'ny fihazana sy ny fanjonoana mihoatra kokoa noho ny fiompiana sy ny fambolena ary ny fitrandrahana. Ny fomba nahitana an-dry zareo dia ny lalana: mampiasa azy io hamindrana entana eo amin'ny morontsiraka sy ny tendrombohitra ry zareo. Manavatsava an'i Tadó, tanàna kely manankarena volamena, ao anatin'ny departemantan'i Chocó amin'izao fotoana izao, ary ahitana andevo Afrikana an-jatony niasa tao, ny lalana falehan-dry zareo. Rehefa mihaona ry zareo ny Alahady, na Sabotsy indraindray, dia manana ‘seha-pahalalahana kely’ ny teratany sy ny andevo ka amin'izany ry zareo no mifampizara ny fomba amam-panaony.
Ireo andevo nolazain'i Zuluaga dia avy any Mali ary ny lehilahy avy any dia efa zatra mandany ny fotoanany lavitry ny fonenany. Ny lehilahin'ny Emberá ihany koa dia mety mandany roa na telo herinandro any am-pihazana biby anaty ala any, ka dia nampianarin'ny Mali azy ireo ny ‘fikarakarana’ fanaony ifehezany ny fananahan'ny vehivavy.
Ny Emberá Chamí dia ao anatin'ny fokonolona teratany 30 ahiana ho lany tamingana avy ao Kôlombià. Ara-tantara dia nahatratra ny maro tamin'ireo mpikambana ao aminy ny fahantrana lalina. Lasibatry ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana raha tsara indrindra ary herisetra sy ny famindran-toerana hiala amin'ny taniny raha ny ratsy indrindra ny Emberá Chamí ary tratran'ny fifampitifiran'ireo vondrona mitam-piadiana miasa ao amin'ny faritra ihany koa.
Tombanan'ny fikambanana mpandala ny zon'olombelona sy mpisolovavan'ny vehivavy fa manodidina ny 100 ka hatramin'ny 130 tapitrisa ny vehivavy eto ambonin'ny tany ampijalian'ny fandrombinana [fanjairana no marina kokoa?] ny fitaovampananahana. Ary raha jerena ny ao Kôlombià, dia heverin'ny manampahaizana manokana fa ao amin'ny fokonolona Emberá Chamí, zazavavy telo na efatra isan-taona no matin'ny “fanadiovana-fitsaboana”:
“Vehivavy ao, Emberá aho ary tsy manao ny fandrombinana ny fitaovam-pananahan'ny vehivavy.” Ny hafatra ankehitriny dia nentin'i Norfilia Caizales, mpanolotsaina ny vehivavy ao amin'ny Vaomieram-Paritra Teratany ao Risaralda (CRIR), ary tsy afa-mazava mihoatra izany na resy lahatra mihoatra noho izany ireo vehivavy hafa avy amin'ireo fialofana ireo. “Hatramin'ny 2007 izahay no nitady fomba vaovao hampaherezana ny zazavavinay, ary fotoana izao hitenenana, ‘Tsy mila mampihatra ny fanadiovana-fitsaboana intsony,’” hoy i Norfilia nanampy ny teniny.
Araka ny antontanisan'ny UNICEF, ny fandrombinana ny fitaovam-pananahan'ny vehivavy dia mivangongo amin'ny tetezantanin'ny firenena 29 ao Afrika sy Afovoany Atsinanana.
nandray anjara fanoratana ity tsanganana ity i Gabriela García Calderón.